मनोरंजों | Nepstok
काठमाण्ठौं । पछिल्लो समय नेपाली नायिकाहरूको पनि पारिश्रमिकको चर्चा हुने गरेको छ । यसैक्रममा हामीले केहि नायिकाहरूको पारिश्रमिकबारे चर्चा गरेका छाैँ । पुजा शर्माः नायिका पुजा शर्माले चलचित्र ‘अझै पनि’ बाट डेब्यु गरेकी थिइन् ।यस चलचित्रको सफलता पछि उनका चलचित्र ‘प्रेम गीत’, ‘म यस्तो गीत गाउँछु’, ‘राम कहानी’ लगायत ब्याक टु ब्याक सुपर हिट भएका […]
May 30, 2021 NepstokLeaveaComment on अति नै मा,र्मिक कथा मन थामेर न,रोई पढ्नुहोला ! अरुलाई पनि पढ्ने मौ,का दिनुहोला
एक सुन्दर जोडि थिए ! केटा र केटि धेरै बर्ष माया प्रेम बसे पछि विवाह गर्छन , विवाह पछि त झन माया प्रेम पनि धेरै बड्दै जान्छ,दुबै जना धेरै नै खुशि र एक सुखि परिवारका साथ रमाउदै जिवन निर्वाह गरि रहेका हुन्छन। बिहान बेलुका श्रीमती पुजा पाठ गर्न गरेर सधै आफ्नो पतिको लामो आयु होश […]
यी ४ भारतिय कलाकार जाे नेपाल भनेपछि मरिहत्ते गर्छन
May 29, 2021 May 29, 2021 NepstokLeaveaComment on यी ४ भारतिय कलाकार जाे नेपाल भनेपछि मरिहत्ते गर्छन
नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटिबेटीको छ भन्ने गरिन्छ केहि नेपालि हरु भारतीय संग बिहे गरेर उतै बसेका छन् केहि भारतीय हरु नेपाल बिहे गरेर आएका छन त्यस्तै आज हामि भारतीय कलाकार हरु जसको नेपाल संग नाता रहेको बारेमा चर्चा गर्ने छौ । केहि भारतीय बलिउड कलाकार हरु जसको नेपाल संग पारस्परिक सम्बन्ध रहेको छ । […]
यि युवतीसंग विवाह गर्न चाहन्थे दुई युवा, युवतीले नमानेपछि भयो नसोचेको घटना
May 28, 2021 May 28, 2021 NepstokLeaveaComment on यि युवतीसंग विवाह गर्न चाहन्थे दुई युवा, युवतीले नमानेपछि भयो नसोचेको घटना
एजेन्सी । कुनै पनि युवतीसँग बिहे गर्नको लागि एक भन्दा धेरै युवकले चाहना राख्नु स्वभाविक नै हो । यसरी बिहे गर्न चाहनेमध्ये युवतीले कुनै एक युवक रोजेर बिहे गर्न सक्छिन् । त्यस्तोमा अरुले चित्त बुझाउँछन् । तर, पाकिस्तानमा एक युवतीसँग बिहे गर्नको लागि दुई जना युवक पछि लागे । ती दुई युवकको झ’गडामा निर्दोष युवतीले […]
इन्द्रेणीकि गायिका कल्पना दाहालको आज जन्मदिन
May 28, 2021 May 28, 2021 NepstokLeaveaComment on इन्द्रेणीकि गायिका कल्पना दाहालको आज जन्मदिन
चर्चित लोकदोहोरि गायिका कल्पना दाहालको आज जन्म दिन परेको छ । आज परेको शुभ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उ त्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सञ्जालमा शुभकामनाको ओइरो लागेको छ । चर्चित लोकदोहोरि गायिका कल्पना दाहाल पछिल्लो समय सा माजिक सं जाल मा चिनिएकी छिन्। उनले इन्द्रेणी कार्यक्रममा रमेश प्रशाईसंग गाएको दोहोरि बाट उनि धेरै चिनिएकी […]
May 28, 2021 May 28, 2021 NepstokLeaveaComment on पति र पत्नीबीचको उमेर कति वर्षले अन्तर भए हुन्छ जीवन सुखमय ? जान्नै पर्ने कुरा
नेपाली समाजमा श्रीमान् भन्दा श्रीमतीको उमेर कम हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ। सायद पितृसतात्मक सोंच-चिन्तनले पनि यसमा काम गरेको हुनुपर्छ। युवतीहरु पनि आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग दाम्पत्य जीवन विताउने अभिलाषा प्रकट गर्छन्। उनीहरु प्रेम गर्दा होस् वा विवाह गर्दा, आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग गर्न चाहन्छन् । गरिरहेका हुन्छन् पनि। किनभने अक्सर युवतीहरु पुरुषबाट सुरक्षा […]
May 28, 2021 May 28, 2021 NepstokLeaveaComment on मायामा उमेरले छेक्दैन भन्ने भनाइलाई सहि साबित गर्दै आफुभन्दा सानोसँग बिहे गरेका ५ नेपाली नायिका ।
धार्मिक शास्त्रका अनुसार श्रीमती भन्दा श्रीमानकाे उमेर केहि बर्षले ठूलाे हुनु पर्ने मान्यता रहेकाे छ । त्यस्तै, पछिल्लाे समय भने उमेरकाे ख्याल नराखी कुनै भेटघाट तथा सामाजिक संजालमा हुने कुराकानीले गर्दा पनि माया बसेर बिहे गरिरहेका… धार्मिक शास्त्रका अनुसार श्रीमती भन्दा श्रीमानकाे उमेर केहि बर्षले ठूलाे हुनु पर्ने मान्यता रहेकाे छ । त्यस्तै, पछिल्लाे समय […]
May 27, 2021 May 27, 2021 NepstokLeaveaComment on नेपालकी पहिलो मुस्लिम हिरोइन ओशिमा भन्छिन्- समाजको ‘डर’ छैन तर..
मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले कला क्षेत्रमा लागेका मुस्लिम समुदायका नेपाली महिला विरलै भेटेकी छन्।‘भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत देशमा थुप्रै मुस्लिम महिला फिल्म क्षेत्रमा चर्चित छन्, नेपालमा भने फिल्म, फेसनजस्तो खुलापन भएको क्षेत्रमा त परै जाओस्, राम्रो प्रतिभा भएका मुस्लिम महिलाले रेडियोमा समेत काम गर्न पाएका छैनन्,’ मोहनाको अनुभव छ। पचास वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको फिल्मक्षेत्रमा […]
May 27, 2021 May 27, 2021 NepstokLeaveaComment on बलिउडका सबैभन्दा महँगा ७ आइटम गर्लः लिन्छन् नसोचेको पारिश्रमिक !
आइटम गीतलाई बलिउड चलचित्र हिट गराउने एक अचुक अस्त्र मानिन्छ। करीना कपूर देखि दीपिका पादुकोण जस्ता चर्चित अभिनेत्रीहरु पनि आइटम गर्ल बनिसकेका छन्। यी हुन् बलिउडका सबैभन्दा महँगा आइटम गर्लहर सन्नी लियोनी : ४ करोड देखि ५ करोड रुपियाँ बलिउडमा सन्नी लियोनीको सबैभन्दा बढी डिमाण्ड हुने गर्दछ। सन्नीले शाहरुख खान जस्ता सुपरस्टारको फिल्म ‘रईस’ मा […]